Free Thinker: Living in Singapore VIII (Temasek Poly)
၅၊ ၈။ Polytechnics
ယခုနှစ်များတွင် ကျောင်းသားများ အကြား Polytechnic ပညာရေးသည် ရေပန်းစား လာပါသည်။ ၃ နှစ် သင်တန်း ဖြစ်ပြီး ထိုကမှ တစ်ဆင့် တက္ကသိုလ်သို့ ဆက်တက်နိုင် သလို ကျောင်း ဆက်မတက်ပဲ အလုပ်ဝင် လုပ်၍ လည်း ရပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် Polytechnic ပညာရေး သည် လက်တွေ့နှင့် ပိုနီးစပ်ကာ ကျောင်းသားများ မိမိ စိတ်ဝင်စား သည့် ဘာသာရပ်၊ မိမိ လေ့လာလိုသည့် ဘာသာရပ်ကို စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်နိုင် သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ တနည်း အားဖြင့်လည်း သီအိုရီများ လျော့နည်းပြီး လက်တွေ့ ပိုများသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ မိမိ စိတ်ဝင်စားသည့် ဘာသာရပ်ကို လေ့လာရခြင်း သည် အချိန်ကုန်မှန်း၊ ပင်ပန်းမှန်း မသိပဲ ပိုမို ခရီးရောက် သောကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ် စာရင်းများ အရ အဆင့်မြင့် ပညာရေး တွင် ဘွဲ့ရသူဦးရေ ၂၉ ၂၅၂ ရှိခဲ့ရာ ထိုအထဲမှ Polytechnic မှ ကျောင်းဆင်းသူ ၁၆ ၁၁၇ ဦး၊ တက္ကသိုလ် မှ ဘွဲ့ရသူ ၁၀ ၃၆၃ ဦး၊ National Institute of Education မှ ကျောင်းဆင်း သူ ၂ ၇၇၂ ဦး ရှိသည်ကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် Polytechnic ၏ အခန်းကဏ္ဍ ကို သိသာ နိုင်ပါသည်။ တနည်း အားဖြင့်လည်း Polytechnic ၏ အောက်ဖော်ပြပါ အားသာချက် များကြောင့် Polytechnic ကို ကျောင်းသားများ ပိုမို ရွေးချယ်ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
*သာမန် ယေဘူယျ ကျသော စီးပွားရေး ဘာသာရပ်၊ ရူပဗေဒ၊ ဓါတုဗေဒ စသော ဘာသာရပ်များ အစား မိမိ စိတ်ဝင်စားသော ဘာသာရပ်ကို ပိုမို အသေးစိတ်ကျစွာ သင်ပြ ပေးသည့်အတွက် တကြောင်း။
*GCE ‘A’ Level certificate တစ်ခုသာရမည့် ကောလိပ်ကို တက်မည့်အစား မိမိ အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်း အတွက် ဒီပလိုမာ လက်မှတ်တခု ရနိုင်သည့် အတွက် တကြောင်း။
*Polytechnic တွင်ပို့ချပေး နေသည့် ဘာသာရပ် များမှာ ခေတ်နှင့်အညီ လုပ်ငန်းခွင် များ၌ လက်တွေ့ အသုံး ၀င်သော ဘာသာရပ် များ ဖြစ်သောကြောင့် တကြောင်း။
*Polytechnic များတွင် ပိုပြီး လူကြီးဆန်စွာ independent style နှင့် သင်ကြား ပေးသည့်အတွက် ကြောင့် တကြောင်း။
*သင်ယူနေသော ဘာသာရပ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် project များကို လုပ်ငန်းခွင်မှ ကုမ္ပဏီများ နှင့်အတူ လက်တွေ့ တွဲလုပ်ခွင့် ရသည့်အတွက် တကြောင်း။
စင်ကာပူတွင် Polytechnic ကျောင်း ၅ ကျောင်း ရှိရာ ၎င်းတို့မှာ -
Singapore Polytechnic (http://www.sp.edu.sg/)
Nanyang Polytechnic (http://www.nyp.edu.sg/)
Ngee Ann Polytechnic (http://www.np.edu.sg/)
Republic Polytechnic (http://www.rp.edu.sg/)
Temasek Polytechnic (http://www.tp.edu.sg/) ..... တို့ ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာကျောင်းသား အများစု တက်သော ကျောင်းမှာ Temasek Polytechnic ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာပြည်မှ စိတ် ၀င် စားသူ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ စင်ကာပူမှ Polytechnic များသို့ တက်ရောက်လိုပါက
(၁) ၁၀ တန်း အောင်ရမည်။
(၂) Polytechnic တခုစီမှ ကျင်းပသော ၀င်ခွင့် စာမေးပွဲ ကိုလည်း အောင်မြင် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အသေးစိတ် သိလိုပါက အောက်ပါ web site များသို့ ၀င်ရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါ၏။
Nanyang Polytechnic အတွက် http://www.nyp.edu.sg/Internationalstudents/iss_home.htm Singapore Polytechnic အတွက် http://www.sp.edu.sg/SPweb/appmanager/home/default?_nfpb=true&_pageLabel=SP_FS_International&_nfls=false
Republic Polytechnic အတွက် http://www.rp.sg/admissions/intl_students/index.asp
Ngee Ann Polytechnic အတွက် http://www.np.edu.sg/ss/iss/Pages/default.aspx
Temasek Polytechnic အတွက် http://www.tp.edu.sg/home/admissions/is.htm
စိတ်ဝင်စားသူများ လေ့လာနိုင်ရန် အကျဉ်းချုပ် အချက်အလက် များကို ဖော်ပြပါမည်။ သို့သော် ကျောင်း တစ်ကျောင်း ချင်းအလိုက် သင်တန်းများမှာ အလွန်များပြား ရှုပ်ထွေးလှ သည်ဖြစ်ရာ အားလုံးကို မဖော်ပြ တော့ဘဲ မြန်မာများ အတက်များသည့် Temasek Polytechnic နှင့် ထပ်ဆောင်း လေ့လာနိုင်ရန် Singapore Polytechnic မှ သင်တန်း များကိုသာ ဖော်ပြပေးသွားပါမည်။ အသေးစိတ်ကိုမူ အထက် ဖော်ပြပါ website များတွင် လေ့လာနိုင်ပါ၏။
၅၊ ၈၊ ၁။ Temasek Polytechnic
Temasek Polytechnic ကို ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလ ၆ ရက်နေ့က စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး စင်ကာပူနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း 21 Tampines Avenue 1 Singapore 529757 တွင် တည်ရှိပါ သည်။ Tampines MRT နှင့် Bedok MRT များနှင့် နီးပါသည်။ ကျောင်းသားဦးရေ တစ်သောင်းခွဲ ခန့် ရှိ၏။ ကျောင်းပရိဝုဏ် အကျယ်အ၀န်း မှာ ၃၀ ဟက်တာ (၇၄ ဧက) ရှိပါသည်။ အချိန်ပြည့် သင်တန်းပေါင်း ၅၀ နှင့် အချိန်ပိုင်း သင်တန်း ၄၀ ရှိပါသည်။ Lecture Theatres ပေါင်း ၆၁ ခုရှိပြီး ထိုင်ခုံ ၁၂၄၀ ဆန့် Convention Centre တစ်ခုလည်း ရှိပါသည်။ ဤကျောင်းမှ အပ်နှင်းသော ဒီပလိုမာ လက်မှတ် များကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ရှိ တက္ကသိုလ် ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်မှ အသိအမှတ်ပြု ပါသည်။ ကျောင်း လျှောက်လိုသူများ e-mail: admissions@tp.edu.sg ၊Tel: (65) 6787 8000 နှင့် Fax: (65) 6783 3031 များသို့ ဆက်သွယ်နိုင် ပါသည်။
တစ်နှစ်လျှင် နှစ်တန်းရှိပြီး April Intake နှင့် October Intake ဖြစ်ပါသည်။ ၀င်ခွင့်အတွက် ပညာ အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက် မှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
အင်္ဂလိပ်စာအတွက် - IELTS 5.0/5.5 သို့မဟုတ် TOEFL 500/550 သို့မဟုတ် GCSE Grade 6(C) or better သင်္ချာ - အမှတ် ၇၀ နှင့် အထက် ရရမည်။
မိမိလျှောက်သော သင်တန်းနှင့် ပတ်သက်သော ဘာသာရပ်တွင် အမှတ် ၇၀ နှင့် အထက် ရရမည်။*
ဘာသာရပ် အားလုံး၏ ပျမ်းမျှ အမှတ် ၇၀ နှင့် အထက် ဖြစ်ရမည်။
၁။ လျှောက်လွှာတင်ရမည့် ရက်မတိုင်မီ နှစ်ပတ် အလိုတွင် သင်တန်း လျှောက်လွှာပုံစံကို အင်တာနက်မှ ရယူနိုင်ပါ သည်။ ဤတွင် ၀င်ခွင့်ဖြေရမည့် အမျိုးအစား ၅ မျိုးရှိရာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ မိမိ သက်ဆိုင်ရာ ၀င်ခွင့်ပုံစံကို ရယူရပါမည်။
Direct Polytechnic Admission Exercise (DPAE)
၂။ အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်း (မိတ္တူ) များကို လျှောက်လွှာနှင့် အတူ ပူးတွဲ တင်ပြရပါမည်။ မူရင်းများ မပို့ပါနှင့်။ တင်လိုက်သော စာရွက် စာတမ်းများ ကို ပြန်ပေးလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
၁။ ပတ်စ်ပို့ (သို့မဟုတ်) အိုင်စီ ကဒ်ပြား မိတ္တူ
၂။ အထက်ပါ စာပိုဒ်တွင် ဖော်ပြထားသော ပညာ အရည်အချင်း/ အောင်လက်မှတ်များ မိတ္တူ
၃။ အမှတ်စာရင်း မိတ္တူ
မှတ်ချက်။ ။ မြန်မာ ဘာသာဖြင့် လက်မှတ်များ ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ပြန်ဆိုပေး ရမည်။
၃။ အပြည့်အစုံ ဖြည့်စွက်ပြီးသော လျှောက်လွှာနှင့် တကွ အပိုဒ် ၂ တွင် ဖော်ပြထားသော စာရွက်စာတမ်း အားလုံးကို မှတ်ပုံတင်စာဖြင့် ဖြစ်စေ၊ လူကိုယ်တိုင် ဖြစ်စေ အောက်ပါ လိပ်စာသို့ ပေးပို့ လျှောက်ထား ရပါမည်။
(located inside Professional Development Centre)
Temasek PolytechnicLift Lobby E,
အပြည့်အစုံ မဖြည့်ထားသော လျှောက်လွှာများ၊ စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထား မစုံသော လျှောက်လွှာများ၊ စောပြီး ရောက်လာသော လျှောက်လွှာများနှင့် နောက်ကျပြီးမှ ရောက်လာသော လျှောက်လွှာများကို လက်ခံလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
လျှောက်လွှာကို သတ်မှတ်ထားသော ရက်အတွင်း ပေးပို့ရန် အရေးကြီးပါသည်။
၄။ သတ်မှတ်ထားသော အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံသော လျှောက်လွှာများကို ရွေးချယ်ပါမည်။ လျှောက်လွှာ တစ်စုံသာ တင်ခွင့် ရှိပါသည်။ အကယ်၍ နှစ်စုံသုံးစုံ ပို့ပါက တင်သမျှ လျှောက်လွှာ အားလုံးကို ပယ်လိုက်မည် ဖြစ်ပါသည်။
၅။ လျှောက်လွှာနှင့် စာရွက် စာတမ်းများကို မူရင်းအတိုင်း တင်ရမည် ဖြစ်ပြီး e_mail နှင့် သော်လည်းကောင်း၊ fax နှင့်သော် လည်းကောင်း ပို့သော လျှောက်လွှာများ ကို လက်ခံလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
၆။ လျှောက်လွှာ တင်ခြင်းအတွက် အခကြေးငွေ တစုံတရာ မရှိပါ။ အခမဲ့ ဖြစ်ပါသည်။
၇။ အသက် ကန့်သတ်ချက်မရှိ။ သတ်မှတ်ထားသော အရည်အချင်း ပြည့်မီသူ အားလုံး လျှောက်ထား နိုင်သည်။
မိမိအား ရွေးမရွေးကို မည်သို့ သိနိုင်သနည်း
မိမိအား ရွေးမရွေးကို -
October 2009 Intake အတွက် ၂၀၀၉ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှ ၂၀၀၉ စက်တင်ဘာ လ ၃၀ ရက်နေ့အတွင်း
April 2010 intake အတွက် ၂၀၁၀ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ ၂၀၁၀ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အတွင်း -
https://bluesky.tp.edu.sg/WebUIRO/RO/CASEE/CASEELogin.aspx?CTYPE=F တွင် ကြည့်နိုင် ပါသည်။ အကယ်၍ လျှောက်လွှာသည် 'Under Consideration' ဟု ဖော်ပြနေ ပါက စိစစ်ဆဲ ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး 'Successful' or 'Unsuccessful' ဟု အဖြေ ရသည်ထိ စောင့်ကြည့်ရန် လိုပါသည်။ မိမိ အရွေးခံရသည့် ရလဒ်ကို စာဖြင့်သော် လည်းကောင်း၊ email ဖြင့်သော် လည်းကောင်း အကြောင်းကြားမည် ဖြစ်ပါသည်။
Email : isohotline@tp.edu.sg (please indicate the subject title as 'DAE Enquiry (your country_your name)
(မိမိနာမည်နှင့် နိုင်ငံအမည်၊ ၀င်ခွင့် လျှောက်ထားသော အမည် တို့ကို ဖော်ပြပါ)
Telephone : +65 - 6780 5970 (Kindly note that we are unable to return call to overseas telephone numbers)
(နိုင်ငံခြားမှခေါ်ဆိုသော ဖုံးများကို ပြန်လည် ခေါ်ဆိုနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ)
(စနေ၊ တနင်္ဂနွေ၊ အများပြည်သူ ရုံးပိတ်ရက်များ တွင် ပိတ်ပါသည်။)
သင်တန်းကြေးများမှာ (Tuition Grant မရသူများအတွက်) ပညာသင်နှစ် တစ်နှစ်လျှင် S$ 17762.60 ဖြစ်ပါ၏။
Tuition Grant ရသူများအတွက် S$3309.00 ဖြစ်ပါသည်။
ရည်ညွှန်း။ ။ http://www.tp.edu.sg/home/admissions/is/is_fees.htm
နေထိုင်မှုအတွက် ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်များ (S$)
Temasek Polytechnic တွင် ကျောင်း ၉ ကျောင်း ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ -
1. Temasek Applied Science School
2. Temasek Business School
4. Temasek Engineering School
5. Temasek Humanities & Social Sciences School
6. Temasek Informatics & IT School ........တို့ဖြစ်ပါသည်။
Temasek Applied Science School မှပေးသော အချိန်ပြည့် ၃ နှစ် ဒီပလိုမာ သင်တန်းများ မှာ အောက်ပါတို့
1. Diploma in Applied Food Science & Nutrition
2. Diploma in Baking & Culinary Science
3. Diploma in Biomedical Science
6. Diploma in Consumer Science & Technology
7. Diploma in Pharmaceutical Science NEW!
8. Diploma in Veterinary Technology
Part-time Courses များမှာ -
1. Certificate / Diploma in Acupressure (Tui Na, 推拿)
2. Diploma in Technology (Chemical)
3. Specialist Diploma In Environment and Water Technology ....တို့ ဖြစ်ပါသည်။
Temasek Business School မှပေးသော အချိန်ပြည့် ၃ နှစ် ဒီပလိုမာ သင်တန်းများ မှာ အောက်ပါတို့
1. Diploma in Accounting & Finance
4. Diploma in Communications & Media Management
5. Diploma in Culinary & Catering Management
6. Diploma in Hospitality & Tourism Management
7. Diploma in Hospitality & Tourism Business
8. Diploma in Law & Management
9. Diploma in Leisure & Resort Management
10. Diploma in Logistics & Operations Management
13. Business Studies Grouping
1. Advanced Diploma in Police Studies
2. Certificate in Logistics (Store Management)
3. Certificate in Logistics (Transport Management)
4. Certificate/ Diploma in Para-Legal Studies
5. Certificate & Diploma in Police Studies and Security Management
6. Certificate & Diploma in Security & Fire Safety Management
7. Diploma in Business Practice
8. Specialist Diploma in Accounting & Finance
9. Specialist Diploma in Hospitality and Tourism Management ....တို့ ဖြစ်ပါသည်။
Temasek Design School မှပေးသော အချိန်ပြည့် ၃ နှစ် ဒီပလိုမာ သင်တန်းများ မှာ အောက်ပါတို့
2. Diploma in Environment Design
3. Diploma in Interior Architecture & Design
4. Diploma in Interactive Media Design
5. Diploma in Moving Images
6. Diploma in Product & Industrial Design
7. Diploma in Retail & Hospitality Design
8. Diploma in Visual Communication
Temasek Engineering School မှပေးသော အချိန်ပြည့် ၃ နှစ် ဒီပလိုမာ သင်တန်းများ မှာ အောက်ပါတို့
1. Diploma in Aerospace Electronics (NEW!!) (JAE Code: T50)
2. Diploma in Aerospace Engineering (NEW!!) (JAE Code: T51)
3. Diploma in Aviation Management & Services (JAE Code: T04)
4. Diploma in Biomedical Informatics & Engineering (JAE Code: T38)
5. Diploma in Business Process & Systems Engineering (JAE Code: T43)
6. Diploma in Clean Energy (NEW!!) (JAE Code: T52)
7. Diploma in Computer Engineering (JAE Code: T13 / T05)
8. Diploma in Electronics (JAE Code: T05)
9. Diploma in ETCM* (JAE Code: T05)
10. Diploma in Info-Communications (JAE Code: T37)
11. Diploma in Integrated Facility Design & Management (JAE Code: T28)
12. Diploma in Intelligent Building Technology (JAE Code: T29)
13. Diploma in Interactive Media Technology (JAE Code: T49)
14. Diploma in Mechatronics (JAE Code: T06)
15. Diploma in Microelectronics (JAE Code: T05)
16. Diploma in Media & Communication Technology (JAE Code: T12 / T05)
17. Diploma in Telecommunications (no new intake)
1. Diploma in Electronics (PTS)
2. Diploma in Mechatronics (PTS)
3. Specialist Diploma in Semiconductor Technology ....တို့ ဖြစ်ပါသည်။
Temasek Humanities & Social Sciences School မှပေးသော အချိန်ပြည့် သုံးနှစ် သင်တန်းများ မှာ အောက်ပါတို့ ဖြစ်ပါသည်။
1. Diploma in Psychology Studies
2. Diploma in Gerontological Management Studies
ထို့ပြင် Dual Diploma Programme in Psychology & Early Childhood Studies ကိုလည်းပေးပါသေးသည်။
Temasek Informatics & IT School မှပေးသော အချိန်ပြည့် ၃ နှစ် ဒီပလိုမာ သင်တန်း များမှာ အောက်ပါတို့ ဖြစ်ပါသည်။
2. Diploma in Cyber and Digital Security
3. Diploma in Financial Business Informatics
4. Diploma in Mobile and Wireless Computing
5. Diploma in Game and Entertainment Technology
6. Diploma in Interactive Media Informatics
Part-time Course မှာ Specialist Diploma in Interactive Edutainment ဖြစ်ပါသည်။
နောက်တစ်မျိုးမှာ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း အတတ်ပညာ ဖြစ်ပါ၏။ The Tourism Academy @ Sentosa ဟု အမည် ပေးထားပါသည်။ ထိုကျောင်းမှ Diploma in Hospitality and Tourism Business ဟူသော သင်တန်းကို ပေးပါသည်။
Posted by အေးငြိမ်း at 10:16 AM